Southwind Dredging Little River miaraka amin'i Ellicott Dredger
Novambra 23, 2015
Ny Diviziona fitandremana anaty rano sy trondro ary bibidia an'ny DNREC dia nanambara drafitra ho an'ny tetikasa dredging koperativa ao amin'ny Little River akaikin'i Dover, manomboka amin'ny tetezana Route 9 / Bayside Drive any Little Creek atsinanana mankany amin'ny Helodriky Delaware.
Ny dredging dia kasaina hanomboka amin'ny herinandro faharoa amin'ity volana ity. Southwind Construction of Evansville, Ind., Dia nahazo ny fifanarahana ho an'ilay tetikasa ary hampiasa ny 14 ″ Ellicott izy ireo® Marika 970 marika.
Ny fantsona dia mirefy 12,400 ny halavany ary hihoatra ny sakany amin'ny tongotra 40 any amin'ny faritry ny renirano ary ny 60 tongotra ao amin'ny faritra Delaware Bay, ary hatrany amin'ny halalin'ny tongotra 5 amin'ny salan'isa ambany ambany. Ilay Renirano Little dia nofehezin'ny fanjakana tamin'ny 1981-1982.
Tombony faharoa amin'ny tetik'asa ny fampiasana mahasoa ny dredged fitaovana hamerenana amin'ny laoniny sy hanatsara ny toeram-ponenana anaty rano ao anatin'ny sela Refuge, Wildlife Little Creek Wildlife Area, toerana iray an'ny sela maromaro misy ny impoundment zarain'ny dike mba hahafahan'ny fitantanana misaraka. .
Ny fitaovana fampiasana mahasoa dia hampitombo ny fiakarana ao ambanin'ny sela fitrandrahana mankany amin'ny ambaratonga izay mampiroborobo ny fitrandrahana rano sy ny harena an-tsokosoko samihafa amin'ny shorebird, fanimbana ny fisandratan'ny havoana an-drano izay nahatonga ny fitrandrahana rano misokatra be loatra.
Ny tetikasa $ 1.01 tapitrisa novatsian'ny fanjakana dia ahitana ny fanodinana akora 79,000 metatra toradroa avy amin'ny fantsona, ary ny fanesorana ny fantsom-baravarana 30 ary ny sambo fanilikilihana avy amin'ny lalan-drano akaikin'ny Little Creek.
Misy fantsona iray hapetraka eo amina lalana efa misy any amin'ny faritry Little Creek Wildlife Area mba handrarahana fitaovana mando avy any amin'ny lalan'ny renirano mankany amin'ny sela fialofana.
Ny tetikasa tsy andrasana hitsabaka amin'ny fihazana eny amin'ny faritra. Vinavinaina amin'ny volana oktobra 1 ny fahavitan'ny tetik'asa, alohan'ny vanim-potoanan'ny fihoaran'ny rano.